Kunzwisisa iyo R muCRM | Martech Zone
Kunzwisisa iyo R muCRM
Muvhuro, Ndira 28, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ini ndanga ndichingo verenga yakanaka posvo pa CRM uye ini ndinofunga pane rimwe hombe, rakakura, gomba rakapaza mune akawanda maCRM mashandiro… Hukama.
Chii chinonzi Hukama?
ukama zvinoda a mbiri-nzira kubatana, chimwe chinhu chinowanzo shayikwa kubva kune chero CRM. Ese maCRM makuru ari pamusika anoita basa rinonakidza rekupinda data kutora - asi ivo hapana chavanoita kupedzisa chiuno. Ini ndinotenda ichi ndicho chakakosha nei kuwanda kweCRM kuita kuchikundikana. Uye ini ndinotenda ndicho chisina kusimba chinongedzo mumapuratifomu mazhinji eCRM.
Imwe kutarisa kuGoogle kutsvaga kwe Customer Relationship Management uye iwe uchaona kuti mutengesi wega wega anotsanangura CRM zvakanyanya zvine chekuita nesimba re software yavo. Semuenzaniso, heino Tsanangudzo yeSalesforce:
Tsananguro yakapusa, yakatambanuka inogona kuwanikwa muzita: CRM inzira yakazara yekugadzirisa hukama nevatengi vako? kusanganisira vangangove vatengi? kuitira kwenguva refu uye kubatsirana. Zvikurukuru, echizvino CRM masisitimu anokugonesa kutora ruzivo rwakatenderedza kudyidzana kwevatengi uye kuisanganisa neese zvinoenderana nevatengi basa uye data poindi.
Hmmm… ndinofungidzira kuti haisi tsaona kuti chikuva cheSalesforce chakanangana nekutora data uye kumashure-kwekupedzisira kune kugona kwakasimba kwekubatanidza. Ini ndichiri kufunga kuti ingori hafu yemhinduro yeCRM.
Iyo imwe hafu yemhinduro iri mukubatana kwaunoita nemutengi WAKO. Yako CRM inofanirwa kuve yakatenderedzwa nekutenderera mapoinzi ekufanotaura, nepose paunogona, nguva dzaunofanirwa kuita pahukama hwako nemutengi wako. Uri kufambira mberi sei vatengi vako kuburikidza nehupenyu hwevatengi?
Mienzaniso yeRinobatsira CRM Maitiro
Kana iri tarisiro, ndezvipi zvigadzirwa kana masevhisi anovafarira mukutaurirana kwako kana pawebhusaiti yako (analytics integrated)? Varikutarisira riinhi kuti uchavabata zvakare? Iwe une zviyeuchidzo zvakagadzirirwa kukuzivisa iwe nguva yekutaura navo kana misoro emaimeri akarongwa?
Kana iri tarisiro kana mutengi, yako webhusaiti zvemukati zvine simba zvinopa zvigadzirwa kana masevhisi avakapa kufarira mukati kana kuti iwe wavatengesa? ndofunga Amazon.com anoita basa rakakura kundipa mabhuku - asi ivo vanofuratira chokwadi chekuti ini ndinotenga kwazviri Barnes naNoble, zvakare. Kana ivo vakabatanidzwa Sirifari or GoodReads muaccount yangu, ivo vaizoziva izvo zvandakatotenga uye vaisazozviratidza kwandiri zvakare.
Wakatomisikidza kukosha kumutengi wako waunogona kubva waita? Kana ndikashandisa zviuru zvemadhora newe, urikundibata sei zvakasiyana nevasina kudaro? Ndinoenda kuchitoro chikuru chekofi munharaunda imomo chinondiridzira kwechinguva chidiki yakawanda yenguva pandinowana svikiro. Ivo vanondiziva nezita uye vanoziva kuti ini ndinokosha kwazvo kwavari kupfuura mutengi uyo anoratidza kumusoro kamwe pamwedzi.
Wakaona here kana chinokonzeresa ndechekuti vanhu vagare kana kukusiya? Kana muverengi muverengi wetsamba yako yeemail akavhura zvishanu, asingambodzvanya, uyezve osazvinyora, chii chauri kuita chakasiyana pane tsamba tsamba nhamba 5 yemuverengi asina kumbobvira atinya?
Ndeipi nguva yekupedzisira yawakavatenda kana kukumbira mhinduro yavo pasevhisi yako? Iwe une mari yekushandisa here kana zviitiko zvezviitiko zvakagadzirirwa kutaurirana nevatengi vanoshandisa $ X kana kutenga yega yega X huwandu hwemazuva, vhiki kana mwedzi?
Kuronga, kwakakonzera maemail, mibairo, uye zvine simba zvemukati zvinhu zvakakosha mauri kuchengetedza hukama nemutengi wako uye kuvabatsira kuburikidza nehupenyu hwevatengi. Tarisa uone yako CRM application zvakare… irikubatsira sei kuzviita? Izvo hazvifanirwe kusiiwa kwauri kukudziridza kwese kusangana uku neCRM yako. Kana zvirizvo, iwe hauna CRM system, iwe unongova neyevatengi dhatabhesi.
Analytics, Ngoro dzekutenga, Email Kushambadzira uye Webhusaiti Zvemukati Management masisitimu anofanirwa kuve ese akasanganiswa kuti iwe uve neCRM kuitisa iyo ichazobatsirwa zvizere kubva kune yekutanga mutengo uye nesimba rinodiwa mukuvaka kunze kweCRM kuitiswa. Kana usinga batanidza madota, iwe hauna CRM mhinduro.
ONA: Pandakatsvaga CRM zviwanikwa uye yakanaka dhizaamu pawebhu, ini ndakawana chikuru sosi, iyo Kushambadzira Mudzidzisi.
Tags: CRMhukama hwevatengimutengi wehutano hwehukamaprequalifyproduct product reviewsvanokodzera kutungamiraUkamawirirana patanimaitiro ekutengesaSlider
Mass Midhiya kuMass Social Networks = KUKUNDA
Chii Chinotsvaga Engines Read…
Ndira 28, 2008 na7: 13 PM
Ini zvechokwadi ndinofunga kuti mazhinji maCRM masisitimu anofanirwa kuve nani kunzi maPRM masystem nekuti haasi ezveMutengi Hukama Management asi asi nezveProspect Relationship Management kunyanya patinenge tisina hanya nezve kuenderera kwehukama nemumwe munhu. Mazhinji eaya masisitimu akagadzirirwa vavhimi kupesana nevanozviunganidzira uye chaizvo haana kukodzera kunyangwe iyo 'ivhu uye nekuwedzera' zano iro rinodaidzira kuvaka hukama hwakareba.
MaCRM masisitimu akagadzirwa kubata nhamba hombe dze "vatengi" uye kuvaka hukama kunogona chete kuitwa nemazvo kana isu tichifunga kwakanyanya kuyedza pane vashoma vatengi.
Wataura chokwadi uye chikonzero ndechekuti aya maCRM masystem haana kuvakirwa zvinangwa zvaari kushandiswa.
Jan 29, 2008 pa 3: 46 AM
Pamwe iwe unenge wanyatsoita zvekuvasheedzaProspect Management Maitiro", Kana"PMS”Muchidimbu. Kinda ane chindori chinoshamisira kwachiri, kwete? '-)
Jan 29, 2008 pa 6: 40 AM
U wazvitaura, kwete ini
Jan 29, 2008 pa 3: 31 AM
Mapoinzi makuru. Nesarudzo dzakawanda kwazvo dziri nyore dzemakambani kutanga kutaurirana nevatengi pane imwe padanho rimwe chete, hapafanire kuve nechikonzero chekuti usadaro (facebook, mablog, email).
Kambani yega yega inoshandisa CRM, kuishandisa zvakanyanya kunogona kuve kukosha kwekutsvaga kunopihwa nekambani yako, uye zvese zviri pamazano ako eminwe.
Ndira 29, 2008 na10: 59 PM
Sezvo ini bhurogu nezve chinguva kudzoka, vakawandisa vanoshandisa CRM ku 'stalk' tarisiro yavo pane kugadzira hukama navo.
Jan 30, 2008 pa 10: 31 AM
Nyanzvi idzi dzeCRM hadzirangariri here kuti zvainge zvakaita sei pavaidanana?
Haisi iyo pfungwa yese iri kumashure kweCRM kuvaka hukama hunogara kwenguva refu? Saka, kutsvaka kwakamboguma nehukama riini? Ndinoita sei kumakambani anoratidzira kuwanda kwavanoziva 'nezvangu? Chaizvoizvo, bye-bye.
Ndeipi mhinduro? Ndibvunze, ndibatanidze, unakidze uye unondifadza, ndishamise uye uite kuti ndinzwe ndakakosha. Wow, izvo zvainge zvakaoma.
Sei makambani asingangoiwani? Vanotya kubvunza here? Kutya kurambwa?
Chikafu chekufunga: kana ini ndisingafarire, haudi here kuda kutsvaga nekukurumidza kupfuura gare gare? Saka iwe unogona kutarisa kune avo vanofarira?